အတိုးနှုန်းများသည့် တရုတ်ချေးငွေကို အမြန်ဆုံးပြန်ဆပ်ရန် လွှတ်တော်အမတ် အကြံပြု - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄- အတိုးနှုန်းများသည့် တရုတ်ချေးငွေ များကို အမြန်ဆုံး ပြန်ဆပ်သင့် ကြောင်း အုတ်တွင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒ နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဒေါ်ချိုချိုက ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေး တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှပေးပို့သော ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ကာလ လတ်ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူ ဟာ ထုတ်ပြန်ရေးနှင့် ယင်းအစီရင် ခံစာအပေါ် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူး ပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိ ချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အ စီရင်ခံစာ (၁/၂ဝ၁၉) တို့နှင့်ပတ် သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာ၌ ယင်းကဲ့သို့ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
”၂ဝ၁၄- ၂ဝ၁၅ ခုဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်မှစ၍ နှစ်အလိုက်ပြည်ပ ကြွေမြီ လက်ကျန်အခြေအနေကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဇယားပါအချက် အလက်များကို လေ့လာကြည့်ရာ တွင် တရုတ်ချေးငွေလက်ကျန်အ များဆုံးဖြစ်သည့်အပြင် ပေးရတဲ့ အတိုးနှုန်းကလည်း အများဆုံးဖြစ် နေတဲ့အတွက် တရုတ်ချေးငွေလက် ကျန်ကို ဆောလျင်စွာပြန်ဆပ်သင့် ပါတယ်။ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ ချေးငွေသဘာဝအရ ဆပ်လိုသည့် အချိန်တွင် ဆပ်ချင်သည့် ငွေပမာဏကို ဆပ်နိုင်တာဖြစ်လို့ အတိုး များပြီး နိုင်ငံတော်၏ စုစုပေါင်း ကြွေမြီလက်ကျန်၏ ၄ဝ ရာခိုင် နှုန်းရှိသော ချေးငွေလက်ကျန် အ များဆုံးဖြစ်တဲ့ တရုတ်ချေးငွေကို ဆပ်နိုင်သမျှ ဆောလျင်သမျှ ပြန်လည်ပေးဆပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြု လိုပါတယ်” ဟု `၎င်းကပြောသည်။
အတိုးနှုန်းမြင့်မားသော တရုတ် ချေးငွေကို အလျင်အမြန်ပြန်ဆပ် လိုက်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အ နေနှင့် နှစ်စဉ်ပြန်ဆပ်နေရသည့် အရင်း၊ အတိုးပေါင်းငွေ သိသာစွာ လျော့ကျသွားနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံကြွေမြီသည် ကျပ် လေးဘီလီယံကျော်ရှိပြီး ပျှမ်းမျှအတိုးနှုန်းမှာ လေးရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိ ကြောင်း၊ တရုတ်ကြွေမြီအများစုသည် ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက် က ချေးယူခဲ့သောငွေများဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ချေးယူထားသောကြွေးမြီများ ပြန်ဆပ်ရမည့် ကာလသို့ ဆိုက် ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာအပေါ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခြောက်ဦး တို့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် အများစုက တရုတ်နိုင်ငံကြွေမြီနှင့် ပတ်သက် ပြီး ဆွေးနွေးအကြံပြုကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြွေမြီကို ပြန်ဆပ်နိုင်ရန် မည်သို့နည်းလမ်း ရှာဆောင်ရွက်မလဲဆိုသည့် ကြွေ မြီပြန်ဆပ်ရေးမဟာဗျူဟာလိုအပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်မှအမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်း စိုး(ဘောဂဗေဒ) ကပြောသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကြံပြုဆွေးနွေးချက်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ကျန်ရှိသော အစီအစဉ်များကို လာမည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ပြည်တွင်ဒုက္ခရောက်နေသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ လူငယ် ၆ဝ ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၃၃ ??
ရော်ဘာထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာသော်လည်း တရုတ်အဝယ်နည်းသဖြင့် ဈေးကျ
လာမည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မွန်အမျိုးသား ညီလာခံတစ်ရပ် ကျင်းပသွားမည်
တရားခံ လွှဲပြောင်းပေးရေး အစိုးရသဘောတူညီ၍ ဟောင်ကောင်တွင် ဆန္ဒပြခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းများပြု?
စားသောက်ဆိုင်များတွင် တစ်လအတွင်း ဆီစစ်ထုတ်ကန်များ မဖြစ်မနေ တပ်ဆင်အသုံးပြုကြရန် မန်းစည်ပင?